fun – စာမကျြနှာ5– Healthy Life Journal
ဒီမိန်းမကွာ . . အကောင်းမှတ်လို့ . .
မိန်းမက ယောက်ျားဖြစ်သူကို စကားပြောနေသည်။ “မနက်က အရမ်းလှတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကိုတွေ့တယ် . . .” ယောက်ျားက အားတက်သရောနဲ့ “ဘယ်မှာတွေ့တာလဲ” “ခေါင်းအစခြေအဆုံး ကျွန်မသေသေချာချာကိုကြည့်တာ . . . တော်တော်ကြည့်ကောင်းတဲ့ ကောင်မလေးပဲ” ယောက်ျားက စိတ်မရှည်တဲ့ အသံမျိုးနဲ့...
အချိန်ပိုဆင်းရမည်ဟုဆိုကာ အပြင်ထွက်သွားသောယောက်ျားကို မိန်းမဖြစ်သူက မသင်္ကာသဖြင့် နောက်ယောင်ခံလိုက်ကြည့်လေသည်။ ထင်သည့်အတိုင်းပင် ရုံးမသွားဘဲ ကာရာအိုကေ ဆိုင်ထဲဝင်သွားသည်ကို တွေ့ရလေသည်။ထိုအခါ အနီးအနားတွင်ရှိသော ခန္ဓာကိုယ်ထွားထွားနဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းရှိမည့် အမျိုးသမီးကြီး တစ်ယောက်ကို အကူအညီတောင်းလေသည်။ “အစ်မကြီး… ကျွန်မယောက်ျား ဟိုရှေ့က ဆိုင်ထဲဝင်သွားလို့ ၀င်ခေါ်ပြီး ဒီလမ်းကြားထဲကို...
ခွဲခန်းထဲတွင် . . “ကျွန်တော် တစ်ခါမှ ခွဲစိတ်ကုသမှုမခံဖူးဘူးဗျ … အခု တော်တော်လေးကိုကြောက်နေတယ် ဆရာ” “စိတ်ကိုအေးအေးထားပါဗျာ… ဒါက ပုံမှန်ခွဲစိတ်နေကြပါပဲ… အကောင်းတွေချည်းပါပဲဗျာ” “ဆရာပြောမှ စိတ်နည်းနည်းအေးတော့တယ်ဗျာ” “ဒါပေါ့ဗျာ… ဒီတိုင်း ဝေဒနာတွေခံစားရပြီး မချိမဆန့်ဖြစ်နေရတာထက်စာရင် မေ့ဆေးပေးထားတုန်း ဘာမှမခံစားလိုက်ရဘဲ...
သူနာပြုဆရာမလေးက သွေးပေါင်ချိန်ရန်နှင့် လူနာအခြေအနေစစ်ဆေးရန် လူနာအခန်းထဲ ၀င်လာသည်။ လူနာကုတင်ဘေးရှိ စားပွဲပေါ်တွင် ပန်းသီးများတင်ထားသည်ကိုတွေ့ပြီး လူနာကိုစကားစမြည်ပြောလေသည်။ “တစ်နေ့ပန်းသီးတစ်လုံးစားရင် ဆရာဝန်နဲ့ဝေးဝေး နေရတယ်ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားလေးသိလား….” “ဟုတ်ကဲ့သိပါတယ်… ဒီစကားက အရမ်းကိုလည်း မှန်ပါတယ်…” “ပြောပါဦး အစ်ကို့ရဲ့အတွေ့အကြုံလေး” “ဆေးရုံတက်ပြီးထဲက ဆရာဝန်ကတစ်ခေါက်ပဲ လာကြည့်ပြီး...
သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် တောထဲလမ်းလျှောက်နေစဉ် တစ်ယောက်ရဲ့တင်ပါးကို မြွေကိုက်သွားသည်။ ကျန်တစ်ယောက်က ဆရာဝန်ထံသို့ ဖုန်းဆက်အကူအညီတောင်းလေသည်။ “ စိတ်ကိုအေးအေးထားပါ. . . အရင်ဦးဆုံး မြွေကိုက်တဲ့နေရာကို ရေနဲ့သေချာဆေးပြီး အဆိပ်တွေကုန်သွားအောင် ပါးစပ်နဲ့ စုပ်ထုတ်ပေးလိုက်ပါ. . . ပြီးရင် ဒဏ်ရာနေရာကို အ၀တ်စနဲ့ပတ်ပြီး...
ထွက်နေစရာမလိုတော့ဘူး . . .
အရက်သမားကို သူငယ်ချင်းဖြစ်သူက ငေါက်ငမ်းနေသည်။ “တစ်နေ့ တစ်နေ့. . . အရက်လေးထွက်ဝယ်လိုက် . . . တစ်နေကုန်သောက်လိုက်နဲ့… ဒီလိုပဲ ရှေ့ဆက်သွားရင် မင်းအတွက်အဆင်မပြေနိုင်တော့ဘူးနော်” “ အခုလိုစိတ်ပူပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သူငယ်ချင်းရာ. . . ငါလည်း...
အိမ်ထောင်ဦးစီးတစ်ယောက်က သူ့သူငယ်ချင်းကို အတွေ့အကြုံဝေမျှနေသည်။ “မိန်းမရှိတော့ တချို့ကိစ္စတွေ ခေါင်းပေါ့သွားတယ်” “ပြောပါဦး ဘယ်လိုကိစ္စတွေလဲ” “ကိုယ်လုပ်လို့ မှန်သွားတဲ့ကိစ္စတွေလောက်ပဲ မှတ်ထားဖို့လိုတော့တယ်. . . မှားသွားတာကို ခေါင်းအလေးခံပြီး မှတ်မိနေဖို့ မလိုတော့ဘူးကွ” (Healthy Life ဂျာနယ်မှ စီစဉ်တင်ဆက်သည့် အပတ်စဉ်...
စားပြီးမှ ပြောတော့မယ် . . .
“ ဖေဖေ ယင်ကောင်တွေက စားလို့ရလားဟင်” ” စားသောက်နေတဲ့အချိန် ဒီလိုမေးခွန်းတွေ လျှောက်မမေးရဘူးလို့ ဖေဖေပြောထားတယ်လေ…” ထမင်းစားပြီးနောက် – ” ကဲ … ပြောပါဦး သားခုနက ဘာအကြောင်း သိချင်တာလဲ” “ ဘာမှမဟုတ်တော့ပါဘူးဖေဖေ… ခုနက ဖေဖေ့ထမင်းပန်းကန်ထဲမှာ...
အခုလည်း ဘာထူးလို့လဲ . .
ယောက်ျားတွေ ဖောက်လွဲဖောက်ပြန်လုပ်တတ်တဲ့ သတင်းဆောင်း ပါးတွေဖတ်ပြီး မိန်းမဖြစ်သူက ယောက်ျားကို မေးသည်။ “ ကျွန်မ အသားတွေ မည်းသွားရင်၊ ၀သွားရင်၊ ရုပ်ဆိုးသွားရင်ရော ဆက် ချစ်နိုင်ဦးမှာလား… ” “ ဒါများ အထူးအဆန်းလုပ်လို့ မိန်းမရယ်၊ အခုလည်း ချစ်နေတာပဲ...
စိတ်ဖိစီးမှု ပြေလျော့ချင်ရင် . . .
“စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို လျှော့ချဖို့ အကောင်းဆုံး နည်းလေးညွှန်ပြပေးပါဦးဆရာရယ်. . .” “ကျွန်တော် စိတ်ဖိစီးမှုများရင် လုပ်နေကျနည်းလေးတော့ ပြောပြလိုက်မယ် စမ်းကြည့်ကြည့်ပေါ့…” “ဟုတ်ကဲ့ လိုက်နာပါ့မယ် . . . ပြောပြပါ ဆရာ” “ကိုယ့်မျက်စိထဲမှာ အချိုးသိပ်မပြေဘူးလို့ ထင်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ယောက်ကို မှန်းပြီးသာ...